Inani ulimi ekuphileni kwebantfu kanye nomphakathi, imisebenzi elithize abengumsunguli - lena eqakathekileko ukuba khona umphakathi. Ugcina ngokomoya futhi namasiko abantu. Ngokusebenzisa ulimi abantu ukuba baveze abakucabangayo, ekuvezeni imizwelo. Amagama abantu abadumile futhi bayisebenzise uzisuse ngomnotho siqu womuntu, ukudala ingcebo yomoya womphakathi.
Ulimi kungaba ngefomu ngokuqondile noma ngokungaqondile. Direct - ngqo uxhumane nomuntu, abantu esikhathini sangempela, futhi engaqondile - ukukhulumisana ne-lag esincane, okuthiwa zokuxhumana isikhala-time, lapho amagugu umphakathi ziyadlula ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ngakho, ifa elingokomoya isintu - saturation zomhlaba kwangaphakathi kwezifiso womuntu.
Indima ulimi umphakathi omkhulu ngempela. It yenza umsebenzi yokudlulisela ufuzo nomphakathi. Ulimi abantu abakwazi ukumela izwe, ukuchaza izinqubo ezihlukahlukene ukuthola, esitolo, futhi zizalane ulwazi, imicabango yabo.
Inkulumo - ibhizinesi khadi umuntu, kanye nezincomo enokwethenjelwa kakhulu emsebenzini wakhe lochwepheshe. Esikhathini sphere zabasebenzi ulimi wamsiza ekuphathweni (ukunikeza oda, ukuhlola), kanye lukwazi ukushukumisa ngempumelelo.
Inani ulimi emphakathini nawo njengomnyango mkhulu kakhulu: esebenzisa ngayo ukuthuthukiswa isayensi, ubuciko, ubuchwepheshe, njll Abantu abakhuluma izilimi ezihlukene, kodwa okuphishekelwayo omunye umgomo - ukufeza nokuqonda mutual.
Kodwa indlela umphakathi owakheke ngayo hhayi phansi, umuntu kufanele agcine nemithetho yokuziphatha - isiko okuthiwa yokukhuluma. Isiza abantu ukuxhumana ngokuphumelelayo futhi efanele. Futhi nakhu kubonakala indima ebalulekile yolimi emphakathini.
Kukhona 3 izici yokukhuluma: normative, kuchumana zokuziphatha. Regulatory kuhlanganisa imithetho ehlukahlukene kanye nemithetho inkulumo yomuntu, indlela abantu bathini. Luchumano kuyinto ukuxhumana efanele nabanye abantu - abahlanganyeli yokuxhumana. Futhi izimiso zokuhle kuyinto ukunamathela emithethweni ethile: "Kuphi, nobani nokuthi kanjani ungakhuluma."
Ngokuhamba kwesikhathi, indima ulimi emphakathini sigcizelelwa. isidingo abaningi ukuze uthumele, esitolo. Futhi, ulimi isibe uhlobo isayensi ukuthi idinga ukuba ukwamukela izinkolelo ezingaqondakali. Kukhona othile imithetho, imiqondo, izinhlelo, izimpawu kanye nezimpawu, ithiyori amagama. Lokhu inkimbinkimbi ulimi. Ngakho-ke kubonakala sengathi "imbewu" amanyala emphakathini. Abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna "skhalyavit" futhi bamshaya indiva ngokwanele ukuba ulimi.
Ngoba eminyakeni yamuva nje kuye kwaba okwandisa vulgarization yokukhuluma umkhuba. Umphakathi kungaphezu ulimi tetemibhalo, abantu abaningi zisebenzisa amagama anzima, amasela, inhlamba.
Lena inkinga uphuthuma namuhla, ngoba akukho isethi isiko inkulumo akukwazi ikhambi Ngezinkinga ezijwayelekile kwezenhlalo, kwezamasiko nakwezomnotho.
It kuzoba criminalization esintwini, okuyinto lubonakaliswa inkulumo. Indima ulimi emphakathini ngokuvamile phansi - it is akubhekwa imiphumela emihle kakhulu, esinakho. Kodwa kufanele uqaphele okulandelayo: indlela umuntu ukhuluma, indlela enza futhi ecabanga.
Ingabe ikhambi sekukaningi imfumbe?
Gorshenev Mihail Yurevich: Biography, uthando lokuphila futhi imbangela yokufa umholi iqembu "Inkosi kanye Clown"
Indlela ukukhetha amaqanda ukuze incubator? Ukubeka amaqanda ku incubator
Izindlela eziningana zokuthola kusuka e-Kirov ukuya eMoscow
Yini ukunikeza ingane yakho uNyaka Omusha WamaShayina? amathiphu
Seziqa Siemens: ekuhlaziyeni onobuhle engcono, ukuqhathanisa izimbangi, izibuyekezo zamakhasimende
Imperata cylindrica 'Red Baron': betshala ukunakekelwa kanye nokubuyekeza